Kugadzira Maitiro eMIM
For kunzwisisa kwakadzama kwevatengi vedu Metal Jekiseni Kuumbwa tekinoroji, isu tichaparadzanisa kutaura nezvese maitiro eMIM, ngatitange kubva pakuumba maitiro nhasi. Powder inoumba tekinoroji ndiyo nzira yekuzadza pre-yakavhenganiswa hupfu mune yakagadziriswa mhango, kuisa imwe kumanikidza t ...
Mumusika weChinese wehove, kukwezva kunonzwika hakukodzerane nechero chiwanikwa metaerials, asi kuNorth America, tungsten yatokura uye inozivikanwa seye alloy kukwezva kwemakore. Tungsten alloy hove dzinodzika dzinowanzo shandiswa misungo mukukwezva nzira dzekuredza. Nzira yekuredza hove yakatanga kubva muEurope ...
Sezvatinoziva, tembiricha kudzora ndiyo yakakosha kiyi kune kwese kupisa kupisa, differnet zvinhu zvinoda kurapwa kwakasiyana, uye kunyangwe izvo zvakafanana zvinhu neakasiyana density, inodawo kugadziridzwa pane tembiricha kugadzirisa. Kupisa hakusi chete kiyi yakakosha yekushambadzira pr ...
Iko kusarudzwa kweUS kunoguma sei mumusika we tungsten?
Mumavhiki maviri, musika wakanangana neUS #Election. Mhedzisiro yesarudzo ichave nekukanganisa pamusika we tungsten? Izvo zvakanyanya kana zvishoma zvinogoneka. Semuenzaniso, zvido zvemitemo zvevanhu vakasarudzwa zvinokanganisa mamiriro ehupfumi hwepasi rose uye hukama hwekutengeserana hweSino-US, nekudaro mu ...
Tungsten inodzivirira X ray-iyo tungsten application iwe yausingazive
Tungsten-yakavakirwa yakatarwa chaiyo chiwanikwa chinhu chiumbwa chinogadzirwa ne tungsten sematrice uye diki renickeri, simbi, mhangura uye zvimwe zvinotsikisa zvinhu. Iyo haina chete ine yakakwira diki (~ 18.5g / cm3), asi zvakare chinogadziriswa uye chakasimba kugona kunotora yakakwira magetsi mwaranzi (kupfuura iyo radiation abso ...
Iyo yakawedzera yepasirose tungsten musika mugove
Musika wepasi rose we tungsten unotarisirwa kukura nekukurumidza mumakore mashoma anotevera. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekushandiswa kwesimba kwezvigadzirwa zve tungsten mumaindasitiri mazhinji senge mota, nzvimbo yekumhara, mugodhi, kudzivirira, kugadzira simbi, uye mafuta negasi. Dzimwe ongororo dzinofungidzira kuti panosvika 2025, ...
Huru hunyanzvi hwekuredza hove jig
Tungsten Jigs anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana dzekuredza, chero zvivaraidzo zvega kana komputa yekubata hove, zvinogara zvichibatsira anglers kuti vawane goho rakawanda. Mukuona kubva pakushandiswa kuri nyore kwejig, haina zvakawanda zvehunyanzvi zvemukati, asi inongosungwa netambo, uye haina kunyanya kuomera operta ...
Chii chiri kushandiswa kweMIM? Uye zvigadzirwa zveTungsten?
ne admin pane 20-05-20
Kubva pane zvakanakira Metal Jekiseni Kuumbwa, zvigadzirwa kubva kuMIM zvakanyanya kukodzera maindasitiri ayo anoda zvikamu zvine dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini, huremu hwehuremu, uye negoho. Tora zvigadzirwa zve tungsten zvakagadzirwa neMIM semuenzaniso, Tungsten ine chiratidzo ...
Nzira yekusarudza miseve?
ne admin pane 20-04-24
Kune akawanda marudzi akasiyana emiseve pamusika, kubva kundarira kusvika ku tungsten. Parizvino, inonyanya kufarirwa ndeye tungsten nickel dart. Tungsten isimbi inorema inokodzera miseve. Tungsten yanga ichishandiswa muDarts kubva kutanga kwema1970 nekuti inorema zvakapetwa zvakapetwa sendarira, asi miseve yakagadzirwa ...
Nei uchishandisa tungsten sehuremu hwehove?
Iwo masungsten anonyura ari kuwedzera kuve anozivikanwa zvinhu zve bass anglers, asi tichienzanisa nemutobvu, zvinodhura zvakanyanya, sei iwe uri Tungsten? Diki Saizi Kuwanda kweMutungamiriri kunongova 11.34 g / cm³, asi tungsten alloy inogona kusvika 18.5 g / cm³, zvinoreva vhoriyamu yetungsten sinker ini ...